भर्खरै आयो खुशीको खबर ! जन्मेको ११ दिनमा को’रोना बाट आमा गु’माएका नवजा,त शि,शुको रि,पोर्ट नेगे,टिभ आयो [अन्य सदस्यको पनि देखिएन ] – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/भर्खरै आयो खुशीको खबर ! जन्मेको ११ दिनमा को’रोना बाट आमा गु’माएका नवजा,त शि,शुको रि,पोर्ट नेगे,टिभ आयो [अन्य सदस्यको पनि देखिएन ]
भर्खरै आयो खुशीको खबर ! जन्मेको ११ दिनमा को’रोना बाट आमा गु’माएका नवजा,त शि,शुको रि,पोर्ट नेगे,टिभ आयो [अन्य सदस्यको पनि देखिएन ]
काठमाडौं, ५ जेठ । को’रोना भा’इरसको सं’क्रमणबाट मृ’त्यु भएकी सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–९ राम्चे चालिसेगाउँकी सुत्केरी महिलाको १३ दिने शिशु र परिवार सबैको पीसीआर रिपोर्ट ने’गेटिभ आएको छ। धुलिखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा नवजात शिशु, महिलाका श्रीमानसहित परिवारका पाँच सदस्यमा को’रोना सं’क्रमण नपाइएको धुलिखेल अस्पतालमा चिकित्सक डा. सुमनराज ताम्राकारले जानकारी दिए । नतिजा ने’गेटिभ आएपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी सिन्धुपाल्चोकको प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यलयको समन्वयमा पठाउन लागिएको छ ।
४ घण्टामा आउने परीक्षणको नतिजा आउन ढि’लाइ हुँदा आइसोलेसनमा रहेका उनीहरु ४८ घण्टादेखि त’नावमा थिए ।
म म,र्दा मेरो ला,शको चि,ता पनि माझी बस्तीको आँगनमा रहेको इन्द्रावती बगरमा ब,नाईयोस् – श्वेता खड्का (भिडियो हेर्नुस्)